Dadka uu ku dhacay Covid-19 oo dhaafay 18 milyan guud ahaan caalamka
Dadka uu helaalay Covid-19 guud caaamka oo dhaafay 18 milyan
Bukaanada kasoo bogsaday xanuunkaan dilaaga ah ayaa ka badan 11 milyan oo ruux.
WASHINGTON, US – Dadka uu haleelay safmareenka halista ah ee Coronavirus guud ahaan caalamka ayaa kor-u-dhaafay 18 milyan, sidda xaqiijisay Hay'adda Caafimaadka Aduunka ee magaceeda loosoo gaabiyo WHO.
Sidda ku xusan warbixinta, illaa iyo haatan, 11 milyan ayaa ka bogsaday xanuunkaan faafa, kaasoo ay 690,000 kale ay u geeriyoodeen. Sarre u kaca ku yimaada tiradda waa mid la filan karo xilli kasta.
Dhanka kale, Mareykanka ayaa wajahaya soo laba-kac-leyn cusub oo ah caabuqa xilli Aqalka Cad uu saadaaliyey in uu ku faafi doono magaalooyinka iyo degaanadda kale ee miyiga waddankaas ah.
Kiiska Covid19 ee gudaha Mareykanka ayaa waxay sii cagacageynayaan 4.68 milyan, halka geerida ay ka badan tahay 155,000 ruux.
Geesta kale, iyaddoo walaac la xiriira cudurka uu jiro, dalka Sri Lanka wuxuu aadayaa doorashooyinka baarlamaanka. Madaxweyne Gotabaya Rajapaksa wuxuu filayaa in coddeynta ay midnimo horseedi doonto.
Gudaha Ingiriiska, wasaaradda caafimaadka ayaa wadda qorshe lagu xoojinayo awooda dalkaas ee baaritaanadda Coronavirus. Kiiska waxay marayaan 306,000, halka dhimashaduna tahay 46,000 ruux kale.
Ugu dambeyn, Brazil ayaa xaqiijisay 25,800 kiisas cusub iyo 541 kale oo dhimasho ah, taas oo wadarta xaaladaha gaarsiineysa 2.73 milyan, halka dhimashaduna ay tahay 94,000, waana inta la diiwaan-geliyey Axadii.
Kiisaska safmarka Coronavirus ee Soomaaliya oo kor-u-dhaafay 1,700
Soomaliya 26.05.2020. 20:30
Dhimashadda iyo dadka kasoo kabanaya xanuunka ayaa sidoo kale sarre u kac laga dareemayaa.
Ganacsatada oo looga digay in ay ka faa'iideystaan saameynta COVID19
Soomaliya 19.03.2020. 20:00
Kiisaska Covid-19 ee Soomaaliya oo dhaafay 500 xili la xaqiijiyey 48 cusub
Soomaliya 28.04.2020. 17:17
Kiisaska safmarka Coronavirus ee gudaha Jabuuti oo ku dhow 4,400
Afrika 10.06.2020. 23:15
Wasiiro ka tirsan Puntland oo laga helay safmarka Coronavirus
Puntland 07.05.2020. 21:04